Home / sehatra / Tablet / MT4 ho an'ny Android
Ny sehatra varotra MT4 Mobile dia vavahadin-tsehatra ho an'ny tsenam-bola, eny fa na dia efa mandeha aza ianao, manolotra anao ny fomba fijery ara-barotra izay tianao ampiasaina amin'ny alàlan'ny sehatra Desktop MetaTrader 4.
Maro ny fitaovana fanoratana maromaro izao no atolotra hanohanana ny asanao ara-barotra - 30 amin'ireo tolotra ara-teknika tianao indrindra, raki-tsoratra maro samihafa ary ny vidin-tsolika mivantana. Amin'izao fotoana izao dia mora amin'ny fahefana amin'ny drafitra varotra amin'ny iPhone / iPad / iPod Touch na Android.
Mahazo fidirana amin'ny kaontinao amin'ny varotra FXCC ao amin'ny 3 dingana tsotra - midika, manamboara ary midira ao amin'ny sehatra fifanakalozana finday amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny kaontinao FXCC.
Ao amin'ny finday MT4 ianao dia afaka:
Mifandraisa amin'ny kaontinao ara-barotra na aiza na aiza;
Mitantana ny tsenan'ny fidirana sy ny fivoahana amin'ny alàlan'ny fametrahana, fanovana na fanakatonana ny varotra;
Ampiharo ny fampiasana teknikan'ny 30;
Manampahaizana amin'ny sehatra fitondram-panjakana.